Imilinganiselo yeendaba zeNtlalontle kufuneka! | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 18, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Zininzi Ingxoxo malunga nemithombo yeendaba kwezentlalo (kubandakanya ukubhloga) kwaye nokuba iziphumo mazilinganiswe kwaye zingalinganiswa njani.
Omnye umzekelo wemilinganiselo yemidiya yoluntu kubandakanya iifowuni ezenziweyo kwibhlog yendibaniselwano, uphuculo (okanye ukunciphisa) kulwaneliseko lwabathengi, okanye ukwanda kwabathengi ukugcinwa.
Abachasene nemilinganiselo yemidiya yoluntu ngamanye amaxesha bakholelwa ukuba umlinganiso yindlela eya entshabalalweni, okanye ubuncinci bokukhohlisa. Bakholelwa ukuba amashishini kufuneka enze izicwangciso zonxibelelwano kunye nabathengi kunye nethemba kuba yiyo kunene into yokwenza. Ndiyavuma ukuba yinto elungileyo ukuyenza… kwaye kufuneka Linganisa imidiya yoluntu ukubonisa yinto elungileyo ukuyenza!
Umngcipheko wokulinganisa, ewe, ulinganisa ngokungonelanga okanye usekela izigqibo kwiziseko ezingaphelelanga. Ukuba uyigrafu eziguquguqukayo ezi-2 kwaye ufumana unxibelelwano, oko akuthethi ukuba akunikezeli ubungqina obungenakuphikiswa bokuba ikho enye. Kukho enye into eyahlukileyo yokusingqongileyo eyomelele ngakumbi is into oyiphosileyo.
Abaxhasi bokulinganisa amaqhinga entengiso eendaba ezentlalo bahlala beyilahla into yabantu kumajelo eendaba ezentlalo, kwaye babone nje njengesixhobo esitsha sokujongana nokusebenzisa. Mna musa uyavumelana noku. Ndiyakholelwa ukuba lolunye uhlobo lokusebenzisa ngokupheleleyo ngaphakathi kwezixhobo zenkampani zokuthengisa iimveliso zazo kwabo bazifunayo okanye abazifunayo.
Xa ndifunda le post ku ulibale imilinganiselo yemidiya yoluntu Ndiphawule, ngokuyintloko, ukuba ingxoxo yakhe ibiyinto eyothusayo. Amashishini awakhathali nokuba luthini uluvo lwam okanye uluvo lwakho ngokubhekisele kwimilinganiselo yemidiya yoluntu ... baya kulinganisa nokuba zithini na.
Ukulinganisa iimpembelelo zemidiya yoluntu kunzima, kodwa akunakwenzeka. Ndicinga ukuba uninzi lwempikiswano luvela kwinto yokuba ukulinganisa ifuthe kufuna umsebenzi onzima kakhulu. Ukuqinisekisa ukuba zonke iindwendwe ziyalandelwa kwaye zithini izenzo zabo ngokubhekisele kwimveliso nakwinkonzo yakho ayisiyonto ilula… ke luvo lwam ukuba uninzi lwee-media zosasazo zasekuhlaleni nokuba zingaqondi ukuba zenze njani, aziqondi ukuba kutheni, okanye banqena nje.
Abafuni ukulungelelanisa amaxabiso esitokhwe, ukoneliseka kwabathengi, uluvo lwemveliso iyonke kunye nobushushu, izikhokelo ezingenayo, ixabiso lokuzibandakanya, umyinge osondeleyo, kunye Ezengqesho iindleko zakho… kulula ukuthetha nje ukuba zingaphi izinto ozifunayo, iikhomenti, okanye ukukhankanywa kwezinye iisayithi. Ngethamsanqa ngokubandakanya inkampani enebhajethi enkulu yentengiso kwisicwangciso esiliqili seendaba zentlalo ngaphandle kokubaxelela indlela yokulinganisa impumelelo yayo kwiidola neesenti.
Kufuneka silinganise. Kufuneka sibonise. Kufuneka siphucule.
Ukufaka iinjongo kunye namanyathelo kwiMithombo yeendaba yeNtlalontle akuthethi ukuba kufuneka uzilahle zonke ezinye izinto ezinempembelelo kumashishini asebenzisa iindlela zonxibelelwano ukuphucula iziphumo zeshishini. Ukuphucula unxibelelwano nabathengi kunye nethemba, ukubonelela ngendlela yokuzibandakanya, ukuqhubela phambili igunya lenkampani yakho kwindawo yayo, ukufumana iimpembelelo kunye nokuzivumela ukuba zisasaze igama… zonke ezi zinto zilungileyo akufuneki zigxothwe. Unako ukufumana okona kulungileyo kwihlabathi liphela.
Ndinokuzithemba okungathethekiyo kutyekelo lwendalo lweendaba zosasazo ukukhupha iinkampani eziya kuzama ukukhohlisa aba bantu bamnandi. Imilinganiselo ayizukubonelela iinkampani ngokuqonda ukubuya kutyalo-mali kwimidiya yoluntu, umlinganiso uya kubonelela nangeenkampani ngobungqina bokuba inyani kunye nokwenza izinto elubala kuya kubakho. Amandla akumanani. Ndiyathemba ukuba itekhnoloji yentengiso iya kuqhubeka ukuphucula ukuze ukulinganisa ezi ndlela zonxibelelwano kube lula kwaye zichane ngakumbi.
Ukucinga ngokulandelayo, ngenxa yokuba ungqina imidiya yoluntu njengecebo elifanelekileyo lokuthengisa akusathethi ukuba iinkampani ziya kuthontelana ukuya kuyo. Iinkampani ziinqanawa ezinzima ukujika! Sisoloko sithetha iinkampani ukuba zilume isiqwenga ngexesha, ukungqina iziphumo, emva koko sisebenze ukukhulisa inkqubo yazo. Utshintsho lunzima kwaye luthatha ixesha.
Ukwandisa impumelelo ukuze kuphuculwe iziphumo
Epreli 18, 2009 ngo-11: 15 PM
Igama elifanelekileyo. Ndibeka amanqaku amaninzi okulinganisa kuyo kunokuba kungenampilo. Uvavanyo. Linganisa. Uvavanyo. Linganisa. Ngexesha elide iinzame zakho ze-SM ziya kuphucula kancinci.
UGqr Mathew McDougall
Epreli 19, 2009 ngo-6: 15 AM
Enkosi ngokukhankanywa kwebhlog yam, ukuThengiswa kwangaphakathi kwidijithali kwiposti yakho. Ndonwabile ngokukhankanywa kwaye uza kujonga ibhlog yakho .. ezinye izithuba ezintle.
Epreli 20, 2009 ngo-9: 24 PM
Ngendibhale iposti ngendlela engeyiyo. Uyazi ukuba ndinalo mbambano ngamanye amaxesha. ha. Inqaku elipheleleyo lesithuba yayikukubuza ukuba ngaba silandela i-TYPE elungileyo yemilinganiselo ayisiyomfuneko yokungahoyi umlinganiso ngokwawo.
Ukuba singalinganisa into engaphathekiyo njengophawu loyilo kunye noyilo… kuyenzeka kuthi ukuba silinganise imidiya yoluntu njengentlobo yophuhliso lophawu. Ndiyavuma ukuba iinkampani ziyinqanawa enzima ukuyijika. Unomathotholo bekuyimodeli yokuthengisa eqinisekisiweyo iminyaka kwaye kusenzima ukuthengisa abanye abantu kwisixhobo.
Ayinanto yakwenza nobungakanani bomsebenzi owenzileyo ukulinganisa isixhobo. Kuya kufuneka uyazi ukuba ngoku. Inayo yonke into yokwenza nezixhobo zokusebenzisa.
Ndiva ngathi sonke sizama ukungqina iinkqubo kunye nezixhobo ngoku.
Epreli 20, 2009 ngo-9: 30 PM
Ngokuqinisekileyo ngumceli mngeni - ngakumbi njengoko abathengi bethu bebona uhlahlo-lwabiwo mali lwabo lilawulwa ngokuncinci kwaye banqumle ekhohlo nasekunene. Ndijonge phambili kumhla xa sinee-algorithms kunye nezixhobo ezingaphandle kwebhokisi kwibhokisi yethu yezixhobo yokulinganisa ifuthe lokungafihli kunye nokuvuleka!
Kude kube lelo xesha, masiqhubeke sabelana ngeziphumo zethu!
Epreli 20, 2009 ngo-11: 28 PM
Imibuzo, ewe, yeyiphi elinganiswayo kwaye zeziphi izixhobo ezisetyenziswayo- lwenziwa njani naluphi na inxaxheba lomsebenzisi. Kunikiwe ukuba iinkqubo zewebhu zokuhlalutya ziya kubamba kwaye zibonise ukuhanjiswa kwetrafikhi. Abangcono benza ukuba balandele naziphi na iindwendwe ezithunyelweyo kamva kwisiza kwaye, ngethemba, ukuthatha kwabo inxaxheba kumsitho wempumelelo.
Nangona kunjalo, uninzi lwezinto esinethemba lokuba ziya kwenza ukurekhodwa okungcono kunye negalelo ekwandiseni i-pagerank enje ngenkqubo yokukhangela ye-backlinks ye-backlinks ayikho kwi-CMS yezonxibelelwano.
Umzekelo, umyalelo we-robot jikelele "isalathisi, landela", kodwa, oku akuchazwanga kwi-Twitter. Ukuba sijonga ikhowudi ye-RT yam ebhekisa koku kungena kwebhlog:
omnye ubona ukuba i-bots iyalelwe i-rel = "ayilandeli". Oku kuyinyani kwikhonkco "Olunye ulwazi lwe-URL" kwibar yecala leTweeter.
Kwakhona, injini yokukhangela iyalelwa ukuba ingalandeli ikhonkco.
Epreli 22, 2009 ngo-11: 08 AM
Awunakuvuma ngakumbi! Ukulinganisa kubalulekile ekwenzeni ishishini lethu libe yimpumelelo. Uninzi lwabantu okanye iinkampani kunqabile ukuba zenze into kuba "yinto elungileyo ukuyenza". Kuhlala kukho uhlobo oluthile lokukhuthaza olusincedayo. Ukulinganisa kuqinisekisa ukhuthazo kwaye kusivumela ukuba sisebenzise amandla kodwa ukuqonda kokuqonda.
Epreli 27, 2009 ngo-3: 50 PM
Enkosi nge-pingback kwinqaku lam malunga nokulinganisa iMithombo yeendaba yeNtlalontle. Ndivumelana ngokupheleleyo noku! Ndiyamangaliswa kukungafuni ukulinganisa imidiya yoluntu. Ukuze ndibandakanyeke ngokupheleleyo kubathengi ndicinga ukuba kufanelekile, ngakumbi ukuba inkampani ifuna ukuthengisa iimveliso zayo kubantu abazifunayo nabazidingayo. Ukulinganisa iphulo losasazo loluntu yindlela elungileyo yokunxibelelana nabathengi kunye nokufumanisa ukuba yeyiphi imimandla kunye namajelo abawasebenzisayo ukuthetha malunga nenkampani okanye imveliso.